एनआरएनए राजनीतिभन्दा माथि छ भन्छौं हामी, काममा पनि त्यो झल्किनु जरूरी हुन्छ | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
एनआरएनए राजनीतिभन्दा माथि छ भन्छौं हामी, काममा पनि त्यो झल्किनु जरूरी हुन्छ
April 1, 2020 by POLAND NEPAL
धेरैलाई लागेको थियो, इतिहासकै क्रुर र अमानवीय भ्रष्टाचारबाट देशलाई जोगाउन भूमिका खेल्ने केन्द्रीय सदस्य नवीन बिकलाई एनआरएनएले पुरस्कृत गर्नेछ । देशलाई दुई चार लाख चन्दा दिएर खादा ओढ्नुभन्दा झन्डै आधा अर्ब भ्रष्टाचार हुनबाट जोगाउनु ठूलो कुरा हुनुपर्ने हो । उनले त दुबै गरेका थिए ।
१५ लाख होटेल खोज्न
तर, उल्टो कारबाहीको सङ्केत गर्दै विज्ञप्ति पो आयो । राजनीतिबाट मुक्त त हामी को नै छौं र तर सबै कठपुतलीमात्रै छौं जस्तो पनि लाग्दैनथ्यो । विज्ञप्ति पनि कस्तो कायर जस्तो । नाम र के गल्ती गरेको हो भन्नेसम्म त लेख्नु नि !
उनले के कुरा गलत बोलेका थिए ? उनी आफै केन्द्रीय सदस्य रहेको संस्थाले मेडिकल सामग्री सहयोग गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेकै थियो । चीनको नेपाली दूतावासमा सामग्री बुझाउने निर्णय पनि पढिएकै थियो । अहिले चीन अन्य विश्वसँग हवाइ सम्पर्कमा छैन । यो कामको जिम्मा केन्द्रीय सदस्य हुनुले पक्कै उनको र चाइनाको एनसिसीमा हुँदो हो । उनी आफैले दूतावासदेखि महावाणिज्यदूतसम्म समन्वय भइरहेको बताएका थिए । गड़बड़ गर्ने नियत भएको भए त उनले सरकारी कोटेशन एकदम सस्तो छ भन्दा हुन् र एनआरएनएको खरीद पनि त्यही रेटमा गर्दा हुन् । पचास लाख त उनले त्यहीँ खान मिल्थ्यो । तर उनले देशको अनुहार हेरे । सस्तोमा चाइनिज सरकारले सिफारिस गरेको कम्पनीका सामान पाइँदा पाइँदै किन त्यति चर्को मूल्य भनेर आबाज उठाए । यो सरकारको विरोध थिएन, अनियमितताको विरोध थियो । अन्ततः त्यो सही साबित भयो ।
पहिले नै आफ्नै कार्यसमितिले निःशुल्क सहयोग गर्ने निर्णय गरेकाले उनले सरकारसँग जहाज पठाइदिन १० दिनको समय मागेका थिए । अब एनआरएनएले उनलाई पक्कै खरिद प्रक्रियाबाट हटाउला । उनी एक्लैले एक जहाज निःशुल्क सामान पक्कै पठाउन सक्दैनन् । यसमा उनको किरीकिरी होला र एनआरएनएले जितेको महसुस गर्ला ! प्रश्न त यो पनि उठ्छ कि, एनआरएनले पनि कतै त्यही सरकारी मूल्यमैं सामान किन्न त चाहेको थिएन ? उनले कतै कसैको प्लान चौपट त बनाएनन् ?
एनआरएनए केन्द्रको आर्थिक सङ्कलन अभियानलाई सघाउँदै उनले अलिकति रकम कोषमा सहयोग गरेका रहेछन् । संस्थाको कुनै भाइबर ग्रुपमा रकम दिनेहरूको लहरमा उनको नाम पनि थियो । उल्टो हाम्रा एनआरएनए अभियन्ताहरूले त्यो लिस्ट एडिट गरेर, संस्थाको नाम हटाएर, लौ यो सबै पैसा नवीनले आफै खान जम्मा गरेको हो भनेर मिडियामा पुऱ्याएछन् । रकम दिनेको नामसहित नवीनले एक करोड़ उठाएर खाँदै भन्ने समाचार प्रायोजित भयो । अलिकति दलालले लगानी गरे होलान् । एनआरएनएले विज्ञप्ति त त्यसमा पो निकाल्नु पर्थ्यो र सत्य यस्तो हो भनेर देखाउनुपर्थ्यो । सत्य भन्नुपर्थ्यो कि त्यो पैसा नवीनले उठाएको नभई संस्थाले उठाएको हो र त्यसमा नवीनले उल्टो सहयोग गरेका हुन् । अब त डेटाको त्यो हदसम्म दुरुपयोग हुने भएपछि एनआरएनएलाई कसैले किन सहयोग गर्ने ? मैले संस्थाको कुनै प्रोजेक्टलाई एक हजार सहयोग गरौँला । भाइबर ग्रुपको लिस्टमा मेरो नाम आउला । कसैले आठदश नामको स्क्रिनसट खिचेर लौ नारायण गाउँलेले पैसा उठाएर खायो भन्ने समाचार आयो भने के हुन्छ ? संस्थाले त उल्टो मलाई नचिन्ने विज्ञप्ति निकाल्ला भन्ने डर भो ।
एनआरएनए राजनीतिभन्दा माथि छ भन्छौं हामी, काममा पनि त्यो झल्किनु जरूरी हुन्छ । अझै मौका छ !
← पोल्यान्डमा नेपाली संघ संस्थाहरुको दायित्व र कर्तव्य
COVID 19 will pass – let’s not humanity pass aftermath!!! →